Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Boortaqiiska Sheekada Carruurnimada Raphael Guerreiro Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Cusboonaysiinta ugu dambeysay June 17, 2020
Xaqiiqadeena Raphael Guerreiro Xaqiiqooyinka Taariikhda Caruurnimada ayaa soo bandhigaya warbixin buuxda oo ku saabsan Taariikhdiisa Carruurnimada, Nolosha Hore, waalidiinta, Qoyska, Xaaska, Caruurta, Nolosha Qofka iyo Xaqiiqada Nololeed. Marka si fudud loo dhigo, waa falanqeyn dhameystiran oo ku saabsan Taariikhdiisa Nololeed, laga soo bilaabo waayihiisii ​​hore ilaa markii uu caan noqday.
Raphael Guerreiro Sheekada Taariikh nololeedka- Laga soo bilaabo Caruurnimadiisii ​​ilaa markii la aqoonsaday. Le: LeParisien iyo Picuki
Haa, aniga iyo anigu waan naqaanaa Kubadda Cagta, oo lagu naaneeso "BatarigaAyaa ka mid ah Daafaca bidix ee ugu Fiican Kubadda Cagta Adduunka. Sikastaba, waxaan ogsoonahay inaadan aqrinin koobi buuxa ee Raphael Guerreiro's Biography, kaas oo aan soo diyaarinay isla markaana aad u cajiib badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Raphael Guerreiro:
Dhanka bilawga, Magacyadiisa oo buuxa waa Rapha Ral Adelino José Guerreiro. Kubbad sameeyaha reer Boortaqiis wuxuu ku dhashay maalintii 22aad ee Diseembar 1993 aabihiis, (shaqaale warshad ah), iyo hooyadiis, (hooyo), oo ku taal Le Blanc-Mesnil, warmurtiyeed ku yaal waqooyiga bari ee Paris, France.
Haddii aanad ogeyn, Moussa Sissoko waxay wadaagaan isla dhalashadii ciyaaryahanka lugta bidix. Sida laga soo xigtay warbaahinta Faransiiska, Raphael Guerreiro wuxuu ku dhashay qoys ka kooban 5, kuwaas oo ka kooban waalidkiis iyo saddex walaalo ah. Isagu waa walaashiis ugu yar.
Adigoo ku dhegan magaciisa “Raphael,” waad igu raacsan tahay in Guerreiro uu ku dhashay qoys Christian ah. Sidoo kale, magaca wuxuu ka yimid Cibraaniga oo macnihiisu yahay “Ilaah waa bogsiiyaa.” Ugu dambeyntiina ma aha, sidoo kale waa magaca mid ka mid Malaa'igta Malaa'igta mas'uul ka ah bogsashada.
Asalka Qoyska Raphael Guerreiro:
Ugu horreyn, daafaca dambeedka bidix, sida saaxiibadiisa xulka Portugal- Ricardo Pereira iyo Diogo Jota, kuma uusan dhalan guri hodan ah. Raphaël Guerreiro waalidkiis ma aysan ahayn nooca UU U HAYIN kari waayey caruurnimadoodii ugu qaalisanaa, iskaba daa inaad ka dhigatid inaad kubadsato.
Sidii hore loo sheegay, yeelashada aabe oo ah warshad warshad leh iyo hooyadeed oo ah guri guri waxay la micno tahay inay ka timid asalka qoyska dabaqadda dhexe. Xiligaas, si loo yareeyo qiimaha kirada, qoyska Raphael Guerreiro waxay ku qasbanaadeen inay degaan Le Blanc-Mesnil, waa hoosaad Faransiis ah oo masaafo 32 daqiiqo u jirta bartamaha magaalada Paris.
Guriga Qoyska Raphael Guerreiro wuxuu ahaa kaliya daqiiqadii 32-aad gaari laga raaco Xarunta Magaalada Paris. Map: Khariidadda Google.
Raphael Guerreiro Qoyska asal ahaan:
Xilliga ugu fudud, Kubadda Cagta markii loo eego abtirsiinyadiisa waa kala bar Portuguese iyo kalabar Faransiis ah. Ma ogeyd?… Raphaël Guerreiro wuxuu ku dhashay hooyo Faransiis ah iyo aabaha reer Boortaqiis. Daafaca dambeedka bidix, in kasta oo uu asal ahaan u dhashay France, haddana muddo dheer ayuu aqbalay xididdada qoyskiisa ee Boortaqiiska.
Raphael Guerreiro Nolosha Hore - Sidee Kubadda Loo Bilaabay:
Ilmo kasta oo raba inuu noqdo kubbadda cagta xirfad leh, hal shay waa mid caalami ah. Maahan wax aan ahayn tusaale u qaadashada Idol. Ma ogeyd?… Dhallinyar Raphael Guerreiro, intii lagu jiray caruurnimadiisii, wuxuu taageere weyn u ahaa weeraryahankii hore ee Portugal, Pauleta.
Raphael Guerreiro intii uu yaraa wuxuu dhiirrigeliyay weeraryahanka reer Portugal, Pauleta. Port: PortuguseseAJ iyo Bernews
Wali sawirro Pauleta ayaa ku yaal darbiyada guriga waalidiinta
Guerreiro ayaa mar u warramay wargeyska maalinlaha ee Faransiiska 'L'Equipe- France. Isaga oo sii hadlaya;
Wax badan ayaan ka bartay sirdoonka weeraryahanka reer Portugal, Pauleta. Wuxuu ahaa qof ciyaartooy ku ciyaaraya madaxiisa oo aan cagihiisa kaliya aheyn.
Pauleta, oo ahaa labada xidig ee Ligue 1 ee sanadka ayaa helay aragtida ugu weyn isaga markii uu yaraa. Dhanka da 'yarta Guerreiro, gooldhaliyaha gooldhalinta kaliya ma aheyn kaliya halyeeyada Ligue 1, laakiin waa ciyaartoy ka dhigtay inuu jeclaado kaliya ma ahan kubada cagta Portugal laakiin aabihiis asal ahaan waa Portugal.
Jacaylka aadka u weyn ee kubada cagta wuxuu arkay wax yar oo Guerreiro ah, sanadkii 1999, isagoo iska diiwaangelinaya koox maxalli ah oo la yiraahdo Blanc-Mesnil, oo dhowr mitir u jirtay guriga qoyskiisa. Ka dib shan sano oo uu ku ciyaarayay kubbadda cagta dhalinyarada hiwaayadda, da 'yarka ayaa markii dambe dareemay in la joogo wakhtigii ku habboonaa in la bilaabo xirfad dhallinyaro habboon.
Raphael Guerreiro Biography- Life Career Life:
Xusuusnow tartankii EURO 2004?… Haa, waxay ahayd dhiirigelin weyn da 'yarta madaama tartanku arkay ku dhawaaqista sanamkiisii ​​ugu dambeeyay, kaasoo ka mid ah ciyaartoygii abid ugu fiicnaa Portugal. C Ronaldo. Wixii ka dambeeyay EURO 2004, da 'yarta ayaa xiiseyneysa inay ka soo qeyb gasho tijaabooyinka akadeemiyada Faransiiska ee u dhow.
Farxadda xubnaha qoyska, go'aankii Raphael Guerreiro wuxuu bilaabey inuu bixiyo markii da 'yartu ay u yeeratay akadeemiyadda élite ee Faransiiska, INF Clairefontaine. Akadeemiyada, oo ay xilsaartay Xiriirka Kubadda Cagta Faransiiska ma aheyn inay caruurtooda ku ciyaaraan.
Goor hore, INF Clairefontaine waxay ku qasabtay Guerreiro inuu barto sida ugu dhaqsaha badan ee loo ciyaaro, Feat a kaas oo si lama huraan u caawiyay inuu shukaansado. Ma iloobin, qaan-gaarka da’da yar, farsamooyinka iyo awoodaha laadadka xorta ah ayaa arkay tababarihiisii ​​yaraa oo ka dhigaya kabtan.
Sheekada Nolosha Raphael Guerreiro- Bal eeg maalmahiisii ​​Xanaanada hore. : LeParisien.
Isaga oo ka hadlaya sida quruxda badan ee uu u ahaa da'yar dhalinyaro ah, mid ka mid ah asxaabtiisa kooxda ayaa mar yiri;
Wuxuu ahaa ciyaariyahanka ugu muhimsan kooxda, wuxuu ku adkeystay Ivan Tankeo, saaxiibkiisii ​​hore 13 sano. Sida CR7, isagu wuxuu si guul leh u tooganayaa dhammaan kubbadaha loo yaqaan 'laadadka'.
Raphael Guerreiro Waalidkiis waxay sameeyeen sidii ay isaga khiyaanayn lahaayeen:
Maalmihii dambe, waxay qaadatay ku dhawaad ​​hal saac oo socod ah hooyadiis iyo aabihiis inay ku soo booqdaan dugsiga akadeemiyada- Clairefontaine, halkaas oo uu kubaddiisa ku ciyaaray. Raphael Guerreiro ayaa ku adkeystay, in xusuustiisa ugu wanaagsan ay had iyo jeer ahayd waqtiga waalidkiis ay ku sasabi karaan Chorizo ​​Sandwich, Hadiyad had iyo jeer timaadaba wuxuu qabanayaa waxqabad wanaagsan.
Qaadashada rooti waxaa loo yiqiinay 'Cute Little Sin', sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Faransiiska. Intii uu cunuggu yaraa wax cunay, had iyo jeer wuxuu xasuusan jiray inuu u soo bandhigo saaxiibadiisa gabal yar. Xaqiiqdii, waxaa arkay dad badan oo deeqsi ah, garoonka dhexdiisa iyo banaankiisaba.
Raphael Guerreiro Biography- Wadada loo maro Sheekada:
Kadib markii uu soo maray akadeemiga caanka ah ee xulka Faransiiska ee Clairefontaine, xiddigan kor u kacaya, da'da 14 waxa uu go aansadaa inuu u guuro meel fog, qiyaastii 253.3 km meel u jirta gurigiisa si uu ula ciyaaro Stade Malherbe Caen. Akadeemiyada, wiilka qaan gaarka ah wuxuu ka qalin jabiyay dhalinyaro ilaa kubada cagta sarsare isagoo leh midabo duulaya.
Kadib markii uu si guul leh uga qalin jabiyey Caen, Raphael Guerreiro, sida inbadan oo saaxiibbadiis ah waxay bilaabeen inay u ciyaaraan kooxda keydka Caen. Intii uu halkaas joogay, wuxuu ka sara maray asxaabtiisa kooxda, oo ah muuqaal u saadaalinayay inuu si dhakhso leh ugu biiro kooxda sare ee kooxda. Xitaa kooxda waaweyni, saamigiisa ayaa sii waday. Da, yarka, oo had iyo jeer dhiirigelin ka helay C Ronaldo ayaa arkay inuu helay sumcad kubbad laad xor ah oo qurux badan.
Thanks to geesinimadiisa, FC Lorient, iyo sidoo kale tababbaraha U21 ee reer Portugal ayaa ogaysiiyay oo u yimid inay weeraraan naadiga kubada cagta ee Caen iyagoo helaya saxiixiisa. Mark Lorient, Raphael Guerreiro wuxuu noqday badbaadiye. Ma ogtahay…… doorkiisii ​​badbaadinta FC Lorient inay ka dhaceyso heerka labaad waxay keentay riyadiisii ​​ugu weyneyd ee aheyd inuu dhaco. Mucjiso ahaan, Xiddiga soo kacaya ayaa helay yeedhitaan Boortiqiis ah si uu ugu ciyaaro EURO 2016.
Raphael Guerreiro Biography- Rise Sheekadii Fanka:
Marka laga soo tago dhammaan wixii dhib ah, ayuu Boortaqiiska ka dhabeeyay riyadiisii ​​carruurnimada isagoo noqday qayb muhiim ka ah xulkiisa qaran ee jabiyay quluubtii Faransiiska xilligii Euro 2016. garoonka, inta uu socday tartanku.
Ka dib markii ay u kacday munaasabada EURO 2016, jilaayaha ugu sareeya wuxuu bilaabay inuu soo jiito kooxo badan oo ka mid ah kooxaha ugu sareeya Europan. Waxaana ka mid ahaa Thomas Tuchel's Kooxda Borussia Dortmund ayaa sida la soo weriyay waxay ku siisay kooxda FC Lorient meel ka mid ah gobolka lacag dhan 12 milyan oo euro oo ah adeegiisa.
Sida wakhtigii qorista Raphael Guerreiro's Biography, Kubbad sameeyuhu wuxuu leeyahay, shaki la'aan, wuxuu isticmaalay fursad kasta oo la siiyay isaga oo ah naadi iyo heer qaran.
Laadadka quruxda badan ee Free-kicks, oo ay ka mid yihiin xooggiisa kale, waxay hub muhiim ah ka ahaayeen hubkii Raphael Guerreiro sannadihii la soo dhaafay. La yaab ma laha in loo calaamadeeyay mid ka mid ah Dhabarka bidix ee ugu Fiican qarnigiisa. Inta soo hartay, sida ay yiraahdeen, hadda waa taariikh.
Xaaska Raphael Guerreiro iyo Caruurta:
Waxaa jirta odhaahda ka dambaysa nin kasta oo guuleysta, waxaa jira haweeney. Xaalkeenna, gadaashiisa ciyaaryahan guuleystay sida Raphaël Guerreiro, waxaa jiray gabar saaxiibtinimo ah oo markii dambe noqotay xaaskiisa qurux badan. Iyadu maahan inanto kale oo ubax leh oo magaceedu yahay Marrion.
La kulan Raphael Guerreiro xaaskiisa, Marrion. Iyadu waa haweeneyda ka dambaysa guushiisa ilaa hadda.
Marka laga yimaado ilaha warbaahinta bulshada, waxay umuuqataa Raphael Guerreiro xaaskiisa, Marrion waxay ka soo bilaabatay sidii gabar saaxiib ah kahor intaysan noqon xaaskiisa waqti ku dhow 2016. Si ka sii sii badan,, waxay u badan tahay in labadaba jaceylka ay lahaayeen aroos qaas ah oo kaliya ay wada joogeen qoyskooda iyo asxaabtooda. Guurkoodu runtii waa mid barako leh.
La kulan Raphael Guerreiro Xaaska iyo Wiilkaba meel aad u wanaagsan oo biyo-mareen ah.
Labada jacaylba waxay noqdeen waalidkood wiilkoodii ugu horreeyay, Sacha, oo ku dhawaad ​​dhammaadka 2014. Sidoo kale, qiyaastii maalintii 18-kii Agoosto 2016, Raphael Guerreiro iyo xaaskiisa ayaa gurigooda ku soo dhaweynaya gabar yar oo 'Ana' ah.
Sidaad u aragtay, ku guuleystaha Bortaqiiska EURO wuxuu doorbidayaa inuu arrimaha quseeya qoyskiisa ka dhigo mid sir ah. Tusaale ahaan, wuxuu hubiyaa in wajiyada carruurtiisa oo dhan, waalidiinta, walaalaha (marka laga reebo naagtiisa) in laga fogaado aragtida bulshada. Qeybaha xiga, waxaan kuu sheegi doonaa nooca aabihiis uu yahay.
Waxaan xaqiijinnay xaqiiqda in illaa 2020, Raphael Guerreiro xaaskiisa ay u heshay laba carruur ah.
Isagoo ka duulaya sheekada noloshiisa hore, waxay umuuqataa waalidiinta Raphael Guerreiro inay had iyo jeer dariiq u helaan inay ku fiicnaadaan isaga. Maalmihii dambe, waxay siisay laaluush iyagoo isticmaalaya Chorizo ​​Sandwich. Haatan waa ciyaartoydii kubada cagta u jeediya inay ubadsaaraan wiilkiisa, adiguna waxaad tahay jidkiisa.
Maanta, qoyska Raphael Guerreiro waxay u baahan yihiin jiil kale oo kubada cagta ah, tanina waxay ku imaan kartaa oo keliya wiilkiisa. Sida aabaha casriga ah, xiddigga BVB wuxuu hadda leeyahay waajib. Istaraatijiyaddiisa ugu horreysa ayaa ah sidii loo dhisi lahaa isku xirnaanta wiilka iyo wiilka. Sida ugufiican ee lagu gaaro tan waa inaad waqti ku qaadato Disney Land. Yaa garanaya! Jacaylka wiilka yari u qabo aabihiis ayaa laga yaabaa inuu u arko inuu ku soo celiyo kalsoonida isaga oo qiraya kubada cagta inuu yahay masiirkiisa.
Xiriirka Aabaha iyo Wiilka ayaa muhiim u ah mustaqbalka.
Raphael Guerreiro Nolosha Qofka:
Inaad ogaatid waxa uu kubada cagta ka sameeyo garoonka waxay kaa caawin doontaa inaad sawir fiican ka hesho shaqsigiisa. Marka ugu horreysa, Raphael Guerreiro waa qof ku leh isaga, xaalad gudaha ah oo madaxbannaan ama ku jirta ereyo fudud; Isagu waa badan yahay mid wax garanaya.
Marka laga tago howlaha kubbadda cagta, xiddigga BVB ayaa loo badinayaa in laga dhex helayo gurigiisa dushiisa hiwaayadaha uu jecel yahay. Qiyaas waxa ay tahay?… Waa caado u daawashada taxanaha telefishanka. Sida hoos lagu arkay, Raphael Guerreiro waa taageere weyn oo Netflix ah, kaasoo dhegeysan kara adeegyada-warbaahinta maalintii oo dhan. Daliil ahaan, halkan waxaa ah tusaale isaga oo daawanaya taxanaha TV-ga Netflix "Narcos."
Raphael Guerreiro Nolosha Shaqsiga - Kubbad sameeyuhu wuxuu jecel yahay inuu haysto waqti xasilloon oo uu ku daawado Netflix Series marka uusan ciyaareynin kubbadda.
Si ka sii badan noloshiisa shaqsiyeed, haddii Kubbad sameeyuhu uusan u rogin Netflix, wuxuu doorbidi lahaa inuu waqtigiisa ku qaato ku ciyaarista ciyaaraha fiidiyowga wiilkiisa. Hoos ka fiiri, waxay umuuqataa inay fududahay inuu wiilkiisa ku bilaabo hiwaayadda ciyaarta.
Nolosha Qoyska PlayStation waa Mid Run ah. Ku lug lahaanshaha wiilkiisa laba jirka ah ayaa taas daliil u ah taas.
Raphael Guerreiro Qaab nololeedka:
Qeybtaan, waxaan kuu sheegi doonaa sida uu Kubbad-yaqaanku u arko lacagaha, qiimihiisa saafiga ah iyo sida uu u bixiyo mushaharkiisa. Marka ugu horreysa, waalidiinta Raphael Guerreiro waaliddiinta waxay siinayeen tababar guriga ah oo ku saabsan sida loo ilaaliyo isku dheelitirka caafimaad ee udhaxeeya kharashaadka iyo keydinta lacagta.
Qeybta ugu badan, ku guuleystaha EURO 2016 ma rumeysan yahay inuu si guud u soo bandhigo qaab nololeed qalaad - mid si fudud looga arki karo baabur fara badan, guryo waaweyn / guryo iwm. Qiimahiisa saafiga ah ee hadda ah 8 Million Euros iyo qiimaha suuqa ee 2020 ka badan in ka badan 25 Milyan Euros ayaa wali ku gacan seyray. Raphael Guerreiro ayaa mar ka hadlay maalkiisa- hadaladiisa;
Markii aan ka soo tagay kooxdeyda Caen oo aan aaday dhanka Lorient, ma aaminsani in aan u qalmo € 3m. Taasi waxay ii ahayd lacag aad u badan, gaar ahaan aniga oo og inaan ka soo baxayo Ligue 2. ” Waalidkey xitaa wey iga yaabeen aniga.
Ballan aan naftayda u galo, waxaan isku dayay in aan ku noolaado feejignaankayga oo aan caddeeyo qiimahayga. Ka dib, wakhti ayaan is idhi: 'Maxuu cadaabku usocdaa?' lahaanshaha qiime weyn waxay xitaa kaa dhigi kartaa inaad dareento isku kalsooni.
Nolosha Qoyska ee Raphael Guerreiro:
Khibradeena ku saabsan qorista sheekooyinka taariikhyahanada kubada cagta, waxaan ku xaqiiqsanay in ciyaartooyda reero isku dhow dhow yihiin lagu yaqaan inay leeyihiin dareen xoogan oo lahaansho. Qeybtaan, waxaan kugu siin doonaa xaqiiqooyin badan waalidiinta Raphael Guerreiro iyo sidoo kale xiriirkiisa xubnaha qoyska.
Ku saabsan Raphael Guerreiro Aabaha:
Marka ugu horreysa, aabihiis wuxuu mar ahaa kubadsameeyaha hiwaayadda la ahaa Blanc-Mesnil, kooxdii uu wiilkiisu ka bilaabay xirfadiisa dhalinyarada. Maya mahadnaqiddii kubbada cagta oo ku guuldareysatay, aabihii Raphael Guerreiro markaas ka dib wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo warshad u dhow Paris.
Ma ogeyd?… Aabaha faanka leh ayaa mar doonayay in wiilkiisu u ciyaaro weeraryahan laakiin wuxuu iska caabin kala kulmay tababarayaasha Blanc-Mesnil kuwaasoo ku adkeystay in Guerreiro ay tahay inuu kusii nagaado qadka dhexe ama bidix. Markii ay iska caabiyeen, maamulka naadiga ayaa ka baqay inuu aabihii ka saaro wiilkiisa kooxda. Nasiib wanaag iyaga, taasi ma dhicin.
Ku saabsan Raphael Guerreiro hooyadeed:
Midda ugu horreysa, hooyada Super waa qofka maskaxda ka dambeeya fekerka quruxda badan ee iibsashada Chorizo ​​Sandwiches si ay ugu jiidato wiilkeeda markasta oo uu si fiican ugu ciyaaro garoonka.
Marka tan la eego, hooyada Raphael Guerreiro sidoo kale waa mid aad u ilaalinaysa. Waxay mar ku adkeysatay Blanc-Mesnil (akadeemiyadiisa dhalinyarada) si ay u difaacdo wiilkeeda maxaa yeelay wuxuu 10cm ka gaaban yahay kuwa kale ee da 'iyo kooxeed. Ujeedada ayaa ah in Raphael gaaban uusan ku tartamin jir ahaan asxaabtiisa gaar ahaan tababarka kadib.
Ku saabsan Raphael Guerreiro walaalkiis:
Boortaqiiska ayaa ka soo jeeda qoys caruur dhalo ah. Gurigiisa, gabadha kaliya ee hooyadeed ku dhacda. Labada wiil ee Raphael Guerreiro, waxay umuuqataa curadka, Emanuel inuu aad uga yaqaan walaalka kale. Miyaad sawiri kartaa walaalkii weynaa Emanuel sawirka hoose?
La kulan Raphael Guerreiro Walaal, Emanuel Guerreiro. Waxa uu ka galay booska labaad kaalinta bidix.
Raphael Guerreiro Xaqiiqooyinka La Keenay:
Qaybtaan gunaanadka ee Qoraalkayaga Taariikhda Carruurnimada iyo qorista Taariikhda, waxaan kuusoo bandhigi doonaa qaar ka mid ah xaqiiqooyinka aadan waligaa aqoonin 'Battery.
Xaqiiqada # 1- Kala goynta Mushaharka
Maalintii 16aad ee Juun 2016, Raphael Guerreiro wuxuu heshiis la galay kooxda Borussia Dortmund, kaasoo u arkaayey inuu sanadkii mushaar ahaan u qaato 1,979,040 Euros. Ka dib markii uu u jebiyey mushaarkiisii ​​jajab yar, waxaan haynaa waxyaabaha soo socda.
Dakhliga ku jira Pound (£)
Daqliga Dollarka ($)
Sanadkiiba € 1,979,040 £ 1,764,146 $ 1,907,386
Per Month € 164,920 £ 147,012 $ 158,949
Asbuuciiba € 38,000 £ 33,874 $ 36,624
Maalintii € 5,428.6 £ 4,839 $ 5,232
Saacadiiba € 226 £ 202 $ 218
Daqiiqaddii € 3.8 £ 3.4 $ 3.6
Halkii Labaad € 0.06 £ 0.056 $ 0.60
Tani waa waxa Raphaël Guerreiro kasbaday tan iyo markii aad bilowday daawashada Boggan.
Xaqiiqada # 2Isugeynta Mushaharka Qofka isku celcelis ah:
Ma ogeyd?… Celcelis ahaan muwaadinka Faransiiska ee qaata $ 2,999 bishii wuxuu u baahan doonaa inuu shaqeeyo 4 sano iyo lix bilood si uu u helo waxa Raphael Guerreiro helo bil.
Waxaa taas ka sii daran, celcelis ahaan muwaadinka Jarmalka ee qaata 3,770 euro bishii waxay u baahan tahay inay shaqeyso qiyaastii seddex sano iyo toddobo bilood si ay u kasbato mushaharka billaha ah ee Raphael Guerreiro.
Ugu dambayntii, celceliska reer Boortaqiiska ee qaata 1188 euro bishii ayaa u baahan doona inuu ka shaqeeyo da 'kow iyo toban sano iyo lix bilood si loo helo mushaharkiisa billaha ah.
Xaqiiqada # 3- Mar ayuu dhaliyay Gool la rumaysan karin:
Ma ogeyd?… Muuqaalka fiidiyowga ee Raphael Guerreiro oo dhaliyay goolal aad u xun oo shucaac dhabarka lagu taabanayay ah isla mar ahaantaana faayras. Fiidiyowga (hoosta) wuxuu marqaati u yahay awoodiisa farsamo ee cajiibka ah iyo dabacsanaanta xeeladaha taas oo runtii ah xooggiisa ugu weyn.
Xaqiiqada # 4- Waxa uu Stats-ka FIFA ka leeyahay:
Sida wakhtigii qorista Raphael Guerreiro's Biography, Kubbad sameeyaha (da'da 26) wuxuu leeyahay sifooyin badan oo wanaagsan oo loogu magac daray magaciisa. Adiga, ma aha 30, laakiin haysashada qiimeynta guud ee guud ee da'da 83 macnaheedu waa, weli waxaa jira sanooyin badan oo ay sii koraan. Ugu dambeyntiina, waxaan aragnaa in Raphael Guerreiro aan lagu qiimeyneynin dhibcaha uu ka heli karo FIFA.
FIFA Potential waxay muujineysaa inuu runtii yahay mid ka mid ah shaqadiisa ugu fiican
Xaqiiqada # 5- Wuxuu leeyahay Amarka Boortaqiiska ee Maamuusta Sharafta:
Kooxdayada gaarka ah ee Raphael Guerreiro kaliya ma ahan ku guuleysiga koobab. Miyaad ogeyd?… Mar buu helay 'Amarka Boortaqiiska ee Macaashka. ' Abaalmarintan ayaa inta badan la siiyaa kuwa ku ammaanay waddanku ku faani karo ficil ahaan ay u shaqeeyaan ama adeegga. Raphael Guerreiro oo ay wehliyaan baandadiisa ayaa noqday abaalmarinta kadib markii ay Portugal ka caawiyeen hanashada EURO 2016.
Fiiri Garabka bidix iyo Gang. Dhammaantood waxay heleen Amarka Boortaqiiska ee 'Merit Portuguese' oo uga mahadcelinaya Euro 2016
Waxaan diyaarinay miis muujinaya macluumad kooban oo ku saabsan xaqiiqda Raphael Guerreiro. Ujeeddadu waxay tahay in lagu siiyo awood aad ku fahanto muuqaalka ciyaartooyda Bortuqiiska.
Weydiimaha taariikh nololeedkooda
Magaca buuxa: Raphaël Adelino José Guerreiro
Ku dhashay: 22kii Diseembar 1993kii markii uu joogay Le Blanc-Mesnil, France.
Waaliddiinta: Hooyo (Asalka Faransiis) iyo Aabe (Ancestry Boortaqiis)
Walaalo: Emanuel Guerreiro
Dhererka: 1.70 m (5 ft 7 gudaha)
Hiwaayadaha: Daawashada taxanaha TV-ga iyo ciyaarista PS4.
Kaalinta Ciyaaraha: Difaaca bidix / khadka dhexe
Faa'iido Fiican: 8 Milyan Euros
Waad ku mahadsan tahay akhriska qoraalkan asalka ah ee ku saabsan Taariikhda Carruurnimada iyo Raphael Guerreiro. Sidaad u badan tahay inaad aragtay, waxaa jira waxyaabo badan oo ku saabsan Kubadda Cagta intaad u maleyn laheyd isaga.
Akhristayaasha sharafta leh, fadlan na sii aragtidaada (yaasha) ku saabsan qodobkan iyo sidoo kale, Kubada cagta qeybta faallooyinka. Tusaale ahaan Cayaaryahanka bidix ee bidix miyuu wax badan ku bixiyaa mustaqbalkiisa?
Rui Patricio Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta